Kuhlaselwe kwabulawa amaphoyisa eNigeria - umbiko - Bayede News
IPhalamende laseSouth Sudan lihlakaziwe
Oshayasibhamu babulale amaphoyisa ayisikhombisa aseNigeria ngobusuku bokuhlasela enkabeni kawoyela eningizimu yesifundazwe iRivers, kusho amaphoyisa ngoMgqibelo.
Abahlaseli bavulele ngenhlamvu endaweni yokuhlola ngoLwesihlanu kusihlwa, base beqhubekela phambili baya eziteshini ezimbili zamaphoyisa, kusho isitatimende samaphoyisa. Amaphoyisa adubule abulala abahlaseli ababili kwalimala nabanye abaphunyuke ngemoto eyebiwe, kuqhubeka isitatimende samaphoyisa.
Lokhu kubulawa kwabantu kwenzeke phakathi kokuwa kwezokuphepha esifundeni iRivers, inhlokodolobha yaso, okuyi Port Harcourt, okuyisango eliya esifundeni esinothe ngowoyela nakwezinye izingxenye zomthengisi omkhulu wase-Afrika kawoyela ongahluziwe.
Ngenyanga edlule, isifunda iRivers savimbela abantu abawela imingcele yayo ebusuku ngenhloso yokunqanda ukubulawa kwamaphoyisa, abezokuvikela umphakathi namasotsha ezempi.
NgoLwesihlanu, la madoda abehlomile abehamba ngezimoto ezimbili zakwaToyota ngezikhathi zasebusuku abulala amaphoyisa amabili endaweni okuhlolwa kuyo amabhuloho eChoba Bridge, kusho okhulumela amaphoyisa uNnamdi Omoni esitatimendeni.
Oshayasibhamu babe sebebulala amanye amaphoyisa amabili bashisa nemoto yokugada esiteshini samaphoyisa eRumuji, kusho u-Omoni. Uphinde waveza ukuthi amaphoyisa adubule lapho abulale abahlaseli ababili.
Abahlaseli abasele babe sebeqhubekela esiteshini samaphoyisa e-Elimgbu, lapho bafike babulala amaphoyisa amathathu ngaphambi kokuba babaleke sebedutshulwa ngamaphoyisa, kusho isitatimende. La madoda abaleke “namanxeba ahlukahlukene okudutshulwa” emotweni eyebiwe, kusho u-Omoni.
Abahlaseli bantshontshe izibhamu ezinhlanu kanti amaphoyisa aseqale umkhankaso wokubathungatha.
IPhalamende laseNigeria ngesonto eledlule linxuse iHhovisi likaMengameli, amabutho ahlomile namaphoyisa ukuba alungise ukungaphephi okwandayo, liphinde lanxuse uMengameli uMuhammadu Buhari ukuthi amemezele isimo esibucayi.
Kusukela ngoZibandlela izigelekeqe sezithumbe abantu abangaphezu kwama-700 ezikoleni ezisenyakatho ntshonalanga, oshayasibhamu sebebulale amasotsha amaningi kanye nezakhamuzi enyakathompumalanga kanti ukuthumba nobugebengu kukhulile ezweni lonke.